Accueil > Gazetin'ny nosy > Volan’ny FER : Natao antoka tsy hampisondrotra ny vidin-tsolika
Tao anatin’ny telo taona izao dia niarahana nahita fa tsy nisy intsony ny fikojakojana ny làlana manerana an’i Madagasikara. Izany dia nohon’ny tsy fisian’ny vola intsony tao amin’ny FER (fond d’entretien routier). Ity vola ity dia avy amin’ny haba alaina amin’ny solika ho entina hikojakojana ny làlana). Fomba fikojakojana ny làlana teto Madagasikara nanomboka ny taona 1998 izany izay efa hita fa nahomby.
Ny taona 2020 dia natao antoka avy hatrany any amin’ny mpandraharaha ny solika ity vola ity mba tsy hampiakaran’izy ireo ny fidin-tsolika noho ny fiakarany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Tapaka hatreo ny fikojakojana ny làlana teto Madagasikara noho izany. Nijaly koa ny koapania efatra mpandraharaha ny solika, dia ny Jovena, Chell, Total, ary ny Galana izay matiantoka tanteraka ankehitriny ka hikantona atsy ho atsy vokatr’izany. Vola mahatratra any amin’ny 500 miliara ariary any ho any no tsy voaloan’ny fanjakana amin’ireo orinasa ireo. Tsy maintsy hahazo ny orinasa hafa izany.
Tao anatin’ny taona telo izay dia tsy naha voaloa ny volan’ireo mpandraharaha mpanao làlana intsony ny fanjakana. Orinasa an-jatona no potika noho izany.
Nisy fiatraikany tamin’ny resaka toe-karena teto Madagasikara ity fanampahan-kevitrin’ny fanjakana ity. Misy ireo mpandraharaha izay torian’ny banky noho ny volany tsy voaloa. Misy koa ireo misedra fahasahiranana tanteraka. Fianakaviana aman’arivony no tsy nanana asa intsony.
Miatraika any amin’ny mpamokatra izany ka tsy mitokamonina ny faritra maro. Eo amin’ny mpanjifa indray dia miakatra ny vidim-bokatra noho izany.
Ny olana faharoa dia ny fahapotehan’ny orinasa mpandraharaha ny solika ankehitriny. Tsy ny tsena iraisam-pirenena intsony no mamaritra ny fandraharahana fa ny fanjakana. Izany no mahatonga ny fatiantoka amin’ny kaompania ireo ankehitriny.
Mbola olana lehibe koa ny fanaovana “requisition” amin’ny orinasa JIRAMA. Terena tsy maintsy mamatsy solika ny JIRAMA izy ireo nefa tsy aloa ny volan’izany.
Izany no ilazana fa nitarika olana amin’ny toe-karena eto Madagasikara ny raharahan’ny FER ity amin’izao fotoana izao. Natao ny fanjakana fitaovana politika nefa vao maika nampiditra kizo ny firenena.